Iibsiga Viagra: Maxaad u baahan tahay in aad ogaato? - BBC News Somali
Image caption Viagra
Ragga waddanka Ingiriiska jooga waxay iminka ka iibsan karaan farmashiyeyaasha qaarkood kiniinka loo qaato la dagaallanka ciniinnimada ee Viagra connect, ayagoo aan sidan warqad dhakhtar uu soo qoray.
Khubarada caafimaadka waxay rajaynayaan in rag badan ay xal u heli doonaan dhibka haysta ee ciniinnimada, taasoo dhibaato ku haysa mid ka mid ah shantii nin ee qaangaar ah, ama 4.3 malyan oo ah rag ku nool UK.
Sida daawooyinka kaleba, waxyeelladeeda ayey wadataa, mana ah in si xun loo isticmaalo.
Haddaba maxay yihiin arrimaha ay tahay in raggu ay ka baaraan degaan inta aysan iibsan kiniinkaa yaryar ee buluugga ah?
Viagra Connect waxaa loogu tala galay in ay qaataan ragga ciniinka ah oo kaliya.
Lagama iibin karo caruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano, inkastoo dumarku ay raggooda u iibin karaan, haddii qofka farmshiga iibinaya uu u arko inay sidaa macquul tahay.
Waxaa kale oo aan laga iibin karin ragga aan jir ahaan awoodin inay galmo sameeyaan. Waxaa ku jira ragga dhibaatooyinka ka qaba xididdada ama wadnaha.
Ragga hinraaga (neeftuura) ama feeraha ay xanuunaan haddii ay laba dabaq fuulaan ama ay waxooga dhaqdhaqaaq jirka ah sameeyaan iyaga ma qaadan karaan.
Toos ma looga gadan kara farmashiga?
Maya. Waxaad u baahan tahay in aad weydiisato qofka farmashiga iibinaya, kaasoo markaa ka dib eegi doonaa in aad dawada qaadan karto iyo in kale. Baakadka ay afarta kiniin ku jiraan wuxuu joogaa lacag ku dhow £20.
Dawadu ma tahay mid shaqaynaysa?
Kiisas badan wax bay ka tartaa, laakin qof walba waxtar uma yeelato.
Dawadu waxay debcisaa xididdada xubinta taranka ee ragga si uu dhiig uga soo buuxsamo.
Waxaa la qaadan karaa haddii cunno la cuno iyo haddaan la cunin, laakin ma ah mid isla markiiba jirka hore ka gasha, khaasatan haddii aad cunno badan cunto.
Waa in aad qaadataa saacad ka hor xilliga aad doonayso inay shaqayso.
Ha la qaadan canabka ama casiirka canabka laga sameeyey, waayo sida ay dawadu u shaqayso ayey saamayn ku yeelanayaan, hana qaadan kiniini ka badan 50mg maalintii.
Cabidda Aalkolka ayaa isna saamayn ku yeesha falgalka dawada.
Maxaa dhacaya haddii ay badato dawadu?
La hadal dhakhtarkaaga ama qofka farmashiga jooga haddii aad is leedahay way xoog badan tahay, ama ay dawadu wakhti dheer jirkaaga ku jirto.
Maxaa ka mid ah waxyeellada ay leedahay?
Tobankii qofoodba mid ka mid ah ayaa lagu arakaa calaamadahan.
- Madax xanuun.
- Midabbada oo qofka xoogaa isaga dhex yaaca.
- Aragtida oo xumaata.
- Sanka oo xirma.
Waa in aad joojisaa qaadashada dawada oo aad dhakhtar la tashataa haddii aad isku aragto calaamadahan.
- Feero xanuun
- Aragtida oo degdeg hoos ugu dhacda
- Xasaasiyad uu jirkaagu ka sameeyo dawada
Ma is diidayaan dawooyinka kale?
Dadka qaata dawooyinka ay ku jirto maaddada nitrate waa in aysan qaadan kiniinka Viagra Connect.
Waxaa kale oo mamnuuc ah in lala qaato dawada riociguat, iyo tan loo qaato xanuunka HIV ee ritonavir.